5 Zavatra tokony ho fantatra momba ny fakantsary polisy amin'ny polisy | Vahaolana OMG
Ny vaovao fakan-tsary dia tsy vaovao tanteraka amin'ity taranaka ity. Matetika isika mahatsikaritra mpiambina mpiambina sy mpikatroka covert hampiasa an'io ho an'ny fitsikilovana mandritra ny fandidiana. Toy ny teknolojia rehetra, ny fakantsary fitafiam-panjakan'ny pôlisy no lasa fironana vaovao amin'ireo masoivoho fampiharana ankehitriny. Rehefa eo am-panaovana ny fandaharan'asa ny masoivoho dia mila jerena tsara ao anatin'ny rafitra fakan-tsary mifehy ny vatana izy ireo ary manadihady raha tena mendrika izany ary misy ny fanamarinana amin'ny fampiharana azy.
Rehefa natao ny fomba fijerin'ny besinimaro momba izany raharaha izany dia hita fa mitombo ny fandraisana andraikitra ary mangarahara ny polisy rehefa ao anaty cams amin'ny lamba vatana. Ny fandinihana natao dia naneho fa ny fihetsika sy ny matihanina dia hita eo an-tamponany, tsy tena vaovao satria ara-dalàna fotsiny, ny olona dia mazàna ny fihetsiky ny olona rehefa fantany foana fa mety ho eo ambany fanaraha-maso izy ireo. Hita fa misoroka ny fampiasana hery izany rehefa tsy ilaina na manalavitra ny fampiasan-kery tafahoatra.
Ny tombotsoany dia nakan'ny manamboninahitra iray raha tamin'ny fakantsary fiakanjoana
Tsy vao izao ny vaovao fa ny masoivoho mpampihatra lalàna dia manana fomba fijery mifanohitra momba ireo fakan-tsary mifono vatana, maro no mahatsiaro tsy mahazo aina amin'ny fanaovana azy mandritra ny asany. Ny tombontsoa sy ny ahiahy sasany hita:
Ny fananana sary mazava momba ny tena toetran'ny olona iray, mazàna dia olana rehefa misambotra olona ianao noho ny asa ratsy sy fandikana ny lalàna. Indraindray, ireo olona tsy fatra-mihetsika manokana ireto dia ho hita mitafy akanjo angel amin'ny akanjo ary miresaka amim-pitoniana. Mety mahasosotra tokoa izany saingy amin'ny fakantsary voatanisa vatana, ny horonantsary naseho dia mety hanaratsy ny vela-pandrika na ny sarety izay mety hataon'izy ireo misintona. Tena mety hanampy be izany rehefa tonga amin'ny fanenjehana.
Toetran'ny fakantsary tsy ananana, matoky izay azontsika amin'ny masonay roa isika, ara-dalàna izany. Mora indrindra ny mamoaka porofo horonantsary mba hanampiana tranga iray, azonao atao ny mandray ny mpitsara na ny mpitsara eny an-dalambe mba hampisehoana azy ireo ny zava-misy any. Rehefa hitan'izy ireo ny mason'izy ireo, ny fanapahan-kevitra dia tena mora ho azy ireo.
Miaraka amin'ny fampidirana fakantsary raikitra amin'ny vatana no hita fa nihena ny fitarainana sy ny fanamelohana nataon'ny polisy. Ny olona dia mirona kokoa, ary manaraka indrindra, rehefa fantany fa misy ny fotoana anaovana fanaraha-maso.
Ny fihenan'ny lozabe amin'ny lalàna momba ny heloka bevava hatramin'ny nanamelohana ny heloka bevava amin'ny fiampangana azy dia vantany vao nisy ny porofo an-tsary natao ho azy ireo. Rehefa tratranao amin'ity hetsika ity dia azo aseho mora foana na iza na iza izany, izany dia hampihena ny mety na ny fahavononan'ny olona miaro anao satria ny porofo rehetra voamarina raha tsy izany.
Efa nisy tokoa ny olana izay tokony ho noraketin'ny polisy ary tokony ho noraketin'izy ireo ve ny zava-drehetra? Eny, olana lehibe io, ny cams amin'ny vatana dia mety manimba ny fifandraisan'ny polisy natsangan'ny polisy nanomboka tamin'ny fahatongavany tamin'ny heriny. Tsara homarihina koa fa ny vavolombelona eo amin'ny sehatry ny heloka bevava dia tia mijanona tsy fantatra anarana ary hanao izay rehetra azo atao mba tsy ho voarakitra. Ny sasany amin'izany fisainana izany, dia mitari-dalana ny polisy hoe oviana ny fampiasana fahaiza-manavaka ary manome tarehimarika izay mampiasa torolàlana. Misy fomba roa lehibe hanehoana hevitra:
Ny iray dia mitaky manoratra iray momba ny fifandraisany amin'ny besinimaro ary tsy amin'ny fotoana fiantsoana fotsiny, ny zava-dehibe dia ny fandraisam-peo na dia ny resaka sivily aza. Saingy araka ny lalàna sasany, ny fitakiana ny polisy dia mirakitra izany rehetra izany dia manimba ny fiainana manokan'ny sivily ary ny fandikan-dalàna izany dia mety ho diso ary mety hihena.
Ny iray hafa dia ny fitakiana ny manetsiky ny manampahefana iray ny ramevany rehefa mamaly ny antso ho an'ny serivisy izy ireo. Ireo serivisy ireo dia mety ho: fikarohana, fifamoivoizana, fisamborana, fijanonana, fanenjehana ary na famotorana aza. Ny fananana manampahefana iray firaketana an-tsary momba ny asan-jiolahy dia mety hanampy sy hamaha haingana ny raharaha heloka bevava.
Zava-dehibe tokoa ny tsy fahaiza-manavaka ary mila jerena, tena zava-dehibe izany satria azonao atao ny mampiditra ny fiainana sivily ary mety hiteraka fihantsiana izany. Zava-dehibe ny fanamarihana ny fotoana tsy fanoratana hetsika; satria toa tsy azo antoka, tsy azo tanterahina na tsy azo atao aza ny fotoana toy izany. Izany anefa, dia mitaky manoratra antontan-taratasy momba ny antony ametrahan'izy ireo ny fakan-dry zareo.
Manana fakantsary vita amin'ny vatana, manome fotoana betsaka azy ireo hahafahany mampiasa teknolojia ekena ho an'ny tarehy mba hahafantarana ireo olona voakasiky ny raharaha iray. Ny fampiasana ity fakantsary ity dia mamela ny manampahefana hisoratra ny manodidina azy, hatramin'izao dia manana zo ara-dalàna izy ireo. Ny ampahany hafa izay tokony hifantohana dia, mandra-pahoviana ireto rakitsoratra ireto azo raisina, ampiasaina, tehirizina na azo jerena. Io no mampisaraka azy ireo amin'ny haino aman-jery hita maso sy tsy misy porofo. Ny taloha dia midika rakitsary azo ampiasaina amin'ny famotopotorana raha ny farany kosa dia mitondra sary mihetsika tsy misy vidiny na fifandraisana amin'ny fanadihadiana, noho izany dia tsy ilaina izy ireo. Zava-dehibe ny fanamarihana ny hoe mety misy firaketana an-tsoratra am-bavany miaraka amin'ny olona ahiahiana ny manamboninahitra iray, saingy tsy mety ny mirakitra famotopotorana amina sivily eny an-dalana. Ny fandikan-dalàna izany ary tsy tokony hiampita ireo andalana ireo.
Tsara ny manamarika fa ny cams vita amin'ny vatana dia manana tombony betsaka, saingy tsy maintsy marihina koa fa ny fiofanana dia tsy maintsy omena ny polisy ary mampahafantatra azy ireo hoe rahoviana sy aiza ary hampiasana azy koa. Tsy tokony ho diso fanantenana loatra ny maha-zava-dehibe ny fahaiza-manavaka.
Be dia be ny vola izay mety handany amin'ny raharaha fitsarana, fa mora foana ny mahita zavatra amin'ny fakana sary ary manakana ny fidirana fivoriana. Ireo mpikaroka nandritra ny fanadihadiana notarihin'ny lab tao amin'ny departemantan'ny polisy DC sy DC Metropolitan dia nanamarina raha tena nisy fiantraikany tamin'ny fomba lehibe ny fisianà fakan-tsary mifono vatana amin'ny manamboninahitra. Hitan'izy ireo fa ny tompon'andraikitra manana fakantsary misaron-tava no voarohirohy kokoa amin'ny raharaha fitsarana, na izany aza dia maro ny tsy fahatokisana satria nolavina ny fidirana ara-pitsarana.
5 Zavatra tokony ho fantatra momba ny fakantsary polisy no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin